Gịnị bụ nkwado: àgwà na ụdị | Green Renewables
Portillo nke German | 14/04/2022 12:00 | Gburugburu
Ihe omume mmadụ na-emetụtawanye gburugburu ebe obibi. Otú ahụ ka ọ̀tụ̀tụ̀ anyị na-erigbu akụ̀ ndị sitere n'okike nke na ụwa enweghị oge iji maliteghachi. Maka nke a, a mụrụ echiche nke nkwado. Ọtụtụ ndị amaghị gịnị bụ nkwado Gịnịkwa bụ maka n'ikpeazụ?
N'ihi nke a, anyị ga-arara isiokwu a na-agwa gị ihe nkwado bụ, ihe akụkụ ya na uru bụ maka ọha mmadụ na gburugburu ebe obibi.
1 gịnị bụ nkwado
2 Echiche nke nkwado na ọkwa ọha
3 Ofdị nkwado
3.1 nkwado gburugburu ebe obibi
3.2 Nkwado akụ na ụba
4 Ọmụmaatụ nke Sustainability
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nkwado bụ ijikwa akụrụngwa iji gboo mkpa dị ugbu a na-etinyeghị mkpa n'ọdịnihu n'ihe egwu. Nke a na-eburu n'uche na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mmepe akụ na ụba na nchebe gburugburu ebe obibi na nhazi nke ọchịchị. Mbụ, nkwado na-eche na ọdịdị na gburugburu ebe obibi abụghị ihe onwunwe na-adịghị agwụ agwụ nke a ga-echekwabara ma jiri ezi uche mee ihe.
Nke abụọ, mmepe na-adịgide adịgide bụ maka ịkwalite mmepe mmekọrịta mmadụ na ịchọ njikọ nke obodo na omenala. Dị ka ndị dị otú a, ọ na-achọ inweta ọkwa dị mma nke ndụ, ahụike na agụmakwụkwọ. Nke atọ, nkwado na-akwalite uto akụ na ụba ma na-emepụta akụ na ụba nha anya maka mmadụ niile na-emerụghị gburugburu ebe obibi.
Akọwapụtara nkwado dị ka igbo mkpa nke ugbu a na-emebighị ikike nke ọgbọ n'ọdịnihu iji gboo mkpa nke ha, na-eme ka nguzozi dị n'etiti ọganihu akụ na ụba, nchebe gburugburu ebe obibi na ọdịmma ọha mmadụ.
Echiche nke nkwado na ọkwa ọha
Nkwụsi ike bụ ihe atụ nke ọganihu na-edobe nguzozi a siri ike taa na-etinyeghị akụ nke echi n'ihe egwu. Iji nweta ya ọ dị mkpa itinye iwu nke 3 rs, iwu nke 5 rs, ma belata ihe mkpofu na ihe mkpofu. Site n'omume dị otú a, anyị nwere ike ịlụso mgbanwe ihu igwe na okpomoku zuru ụwa ọnụ ọgụ.
Echiche nke nkwado dị ugbu a pụtara na nke mbụ na 1987 mbipụta nke Brundtland Report, nke a makwaara dị ka Ọdịnihu Anyị na-emekarị. Ya mere, akwụkwọ a kwadebere maka United Nations bụ nke mbụ na-adọ aka ná ntị banyere mmetụta ọjọọ nke mmepe akụ na ụba na ijikọ ụwa ọnụ. gburugburu ebe obibi. Ya mere, United Nations na-achọ inye ngwọta maka nsogbu ndị sitere na mmepụta mmepụta ihe na mmụba nke ọnụ ọgụgụ mmadụ.
agbakwunyere nkwado n'ọtụtụ echiche metụtara ya, dịka nkwado gburugburu ebe obibi, nkwado ọha na eze na nkwado akụ na ụba. Ya mere, ọtụtụ ihe ịma aka na-eche ụmụ mmadụ ihu, dị ka mgbanwe ihu igwe ma ọ bụ ụkọ mmiri, nwere ike idozi naanị site n'echiche zuru ụwa ọnụ na site n'ịkwalite mmepe mmepe.
nkwado gburugburu ebe obibi
Nkwado gburugburu ebe obibi bụ mmemme na-elekwasị anya n'ichekwa ihe dị iche iche dị ndụ na-enweghị ịhapụ ọganihu akụ na ụba na nke ọha mmadụ.
Ọ na-ezo aka n'ikike nke akụkụ dị ndụ iji nọgide na-arụpụta ihe na ụdị dị iche iche n'oge, si otú a na-akwalite ọrụ dị mkpa n'ihe gbasara gburugburu ebe obibi iji chebe ihe ndị sitere n'okike, ebe ọ na-akwalite mmepe mmadụ iji lekọta gburugburu ebe obibi ha bi. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na azụmaahịa na-ebuli mgbanwe ndị a ugbu a.
Nkwado akụ na ụba
Ịkwado akụ na ụba na-eme ka ọrụ ndị na-achọ nkwado gburugburu ebe obibi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya bara uru.
Na-ezo aka ike ịmepụta akụ na ụba n'ụdị ego zuru oke, nke ịha nhatanha na mpaghara ọha mmadụ dị iche iche, nke ike na idozi nsogbu akụ na ụba nke ndị mmadụ, na ime ka mmepụta na oriri nke mpaghara na-emepụta ego sikwuo ike. Na nkenke, mkpa na-eju afọ na-enweghị ịchụ àjà n'ọgbọ n'ọdịnihu bụ nguzozi n'etiti mmadụ na ọdịdị.
Nkwado ọha na eze na-achọ njikọ na nkwụsi ike nke ndị mmadụ. Ọ na-ezo aka ịnakwere ụkpụrụ na-emepụta àgwà dị ka ụkpụrụ okike, na-ejigide a kwekọrọ na afọ ojuju larịị nke agụmakwụkwọ, ọzụzụ na mmata, na-akwado ndị obodo ka ha na-emeziwanye onwe ha na ịnọgide na-enwe ezi ọnọdụ obibi ndụ, na ịkwalite nsonye ụmụ amaala. ndị a na ha Mepụta ihe ọhụrụ n'ime ọha mmadụ taa.
Nkwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achọ ọchịchị na iwu doro anya iji dozie gburugburu ebe obibi, akụ na ụba na ọha mmadụ. Ọ na-ezo aka n'iwegharị ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba, steeti nwere iwu na-agbanwe agbanwe, ọchịchị dị nchebe, nguzobe nke usoro iwu nke na-ekwe nkwa nkwanye ùgwù maka ndị mmadụ na gburugburu ebe obibi, na ikwalite ịdị n'otu n'etiti obodo na mpaghara iji melite ogo ndụ ha. ndụ Belata ndabere nke obodo na ọgbọ nke usoro ochichi onye kwuo uche ya.
Ọmụmaatụ nke Sustainability
N'okpuru bụ ihe atụ ụfọdụ nke mmepe na-adigide iji tinye echiche a n'ọrụ n'akụkụ niile nke ndụ anyị.
N'ọkwa mba ụwa, e nwere òtù dị iche iche na ha na-eduzi ma na-eso anyị n'ụzọ nke mmepe mmepe na isiokwu ndị ọzọ dị ka ilekọta gburugburu ebe obibi, okpomọkụ ụwa, mgbanwe ihu igwe, wdg.
Nzukọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị elu na mmepe na-adịgide adịgide, ihe si na 2012 United Nations Conference on Sustainable Development (Rio + 20), dochie Commission on Sustainable Development. Nzukọ ahụ bụ akụkụ enyemaka nke Economic and Social Council na General Assembly.
Commission on Sustainable Development bụ ụlọ ọrụ enyemaka nke Economic and Social Council ma nwee ọrụ bụ isi maka nsogbu gburugburu ebe obibi. Ndị otu gọọmentị etiti na-ahụ maka mgbanwe ihu igwe bụ otu ọkachamara pụrụ iche na-enyocha nyocha sayensị ma na-agwa ndị na-eme iwu.
Nzukọ United Nations Forum on Forests bụ akụkụ enyemaka nke Council Economic and Social Council; ọ na-arụ ọrụ nke òtù abụọ bu ụzọ depụtara n'okpuru ebe a. Otu United Nations Environment Programme (UNEP) bụ ọnụ na-ekwuchitere gburugburu ebe obibi n'ime usoro United Nations. UNEP na-arụ ọrụ dị ka onye na-akpali akpali, onye na-enye aka, onye nkuzi na onye na-enye aka maka iji amamihe eme ihe na mmepe mmepe nke gburugburu ụwa.
Dị ka ị na-ahụ, akụkụ ndị a niile bụ isi maka nchekwa gburugburu ebe obibi na imeziwanye akụ na ụba na ọha mmadụ. Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere ihe nkwado bụ na uru ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » gịnị bụ nkwado